हस्तमैथुन केटाले बढि गर्छन कि केटीले ? - Jhapa Online
पीडामा झापा र मोरङका भुटानी शरणार्थीः सरकारसँग स्वदेश फिर्तीको पहल गरिदिन माग
पर्वको संरक्षण कि असमता ?
गौरादहमा सहिदको सम्झनाः रक्तदान तथा श्रद्धाञ्जलि सभा
झापाको बुधबारेमा ज्येष्ठ नागरिक वाग्ले मनाए १०६ औं जन्म जयन्ति
हस्तमैथुन केटाले बढि गर्छन कि केटीले ?
किशोरावस्थामा अधिकांश किशोर किशोरीहरुले हस्तमैथुन गरेको पाइन्छ । यो एउटा सामान्य यौन व्यवहार हो । हस्तमैथुनले किशोर किशोरीमा उत्पन्न हुुने यौन इच्छालाई व्यवस्थापन गर्न निकै महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । विशेषगरी अविवाहित किशोर किशोरीहरुले हस्तमैथुन गर्ने भएपनि केहीमा भने विवाहपछि पनि यो बानी रहेको हुन्छ ।
सन्तुलित हस्तमैथुनले शारीरिक तथा मानसिक फाईदा हुने बताइन्छ । तर अत्याधिक हस्तमैथुन गर्दा भने शरीरमा नकारात्मक असर पनि पर्न जान्छ । पुरुष तथा महिला दुबैले आफ्नो यौनांङ चलाएर हस्तमैथुन गर्ने गर्छन् ।
हस्तमैथुन कस्ले बढि गर्छ ?
भारतमा गरिएको एक अनुसन्धानका अनुसार ४८ प्रतिशत केटीहरु र ७३ प्रतिशत केटाहरुले हस्तमैथुन गर्ने गरेको पाइएको छ । सो अनुसन्धानमा १४ देख १७ बर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीहर सहभागी थिए ।
त्यस्तै २५ देखि २९ बर्ष उमेरका युवाहरुमा गरिएको अर्को अनुसन्धानमा ८५ प्रतिशत महिला र ९४ प्रतिशत पुरुषले हस्तमैथुन गरेको पाइएको छ । यसबाट केटाहरुले केटीको तुलना बढि हस्तमैथुन गर्ने देखिएको छ । तर केटीहरुको संख्या पनि कम देखिदैन् ।
अत्यधिक हस्तमैथुन गर्दा महिलामा केही नकरात्मक असर पर्न सक्छ । यसबाट उनीहरुको वैवाहिक जीवनमा नकारात्मक हुन् सक्छ । किनभने हस्तमैथुनको लतमा फसेका महिलाले विहेपछि पनि पतिसँगको यौन सम्बन्ध रुचि राख्दैनन् । यो कुरा पुरुषको हकमा पनि लागू हुन सक्छ । यसबाट छटपटी बढ्नुका साथै तनाव र चिडचिडाहट पनि बढ्छ । यसले महिनावारीमा गडबढी देखिन पनि सक्छ । –एजेन्सी
विशेष • स्थानीय खबर • स्वास्थ्य
झापासहित १५ जिल्लामा हात्तीपाइले रोग नियन्त्रण अभियान
स्थानीय खबर • स्वास्थ्य
झापाको गोलधापमा ५२२ ले लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा
४१९ अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई सामाग्री प्रदान
विशेष • समाज • स्वास्थ्य
डा. गोविन्द केसीको फेरि अनसन बस्ने चेतावनी